Ny toekarena mandeha amin'ny virosy | Martech Zone
Ny toekarena mandeha amin'ny virus
Alakamisy, Jona 27, 2013 Alakamisy, Jona 27, 2013 Douglas Karr
Tsy mpankafy orin'antoka aho manao vivery ny ainy amin'ny fiezahana ho lasa viriosy… ny ankamaroany tsy afaka mampihena ny raikipohy ary mety hitera-doza be loatra. Tsy midika izany fa tsy afaka mampiasa vola amin'ny fitomboan'ny horonan-tsary marobe ianao. Statistika LEHIBE iray amin'ity infographic avy amin'ny Masters in Marketing, Ny toekarena mandeha amin'ny virus, miavaka… ny dokam-barotra.
Ny fiheverana / fikasana amin'ny fividianana dia mampitombo ny 14.3% amin'ny fijerena fahatelo ny doka amin'ny tranokala fampiantranoana horonantsary ambony.
Statistika tena mahavariana izany ary iray izay araraotin'ny mpivarotra maro. Youtube dia manolotra karazana doka 4 an'ny TrueView:
Doka an-tserasera milalaova toy ny doka amin'ny fahitalavitra alohan'ny na mandritra horonan-tsary hafa avy amin'ny mpiara-miasa Youtube. Ny mpijery mahita 5 segondra ny horonan-tsarinao ary afaka manohy mijery na mandingana azy io.
Doka anatiny asehoy alohan'ny horonantsary mpiara-miasa Youtube izay 10 minitra na mihoatra. Ny mpijery dia misafidy ny hijery iray amin'ireo doka telo na hijery fiatoana ara-barotra mahazatra mandritra ny horonantsarin'izy ireo.
Doka fitadiavana miseho etsy ambony na eo ankavanan'ny valiny mahazatra eo amin'ny pejy valin'ny karoka.
Doka an-tsehatra misehoa miaraka amin'ny horonantsary Youtube hafa, na amin'ny tranokala amin'ny Google Display Network izay mifanandrify amin'ny mpihaino anao.
Ny tsara indrindra dia amin'ny dokambarotra Youtube no andoavanao vola rehefa misy misafidy ny hijerena ny horonan-tsarinao ny mpijery.
Tags: Lahatsary Marketingustreamniparitaka behoronan-tsary
Fikarohana momba ny laharam-pikarohana laharana 2013